सामाजिक सञ्जालमा डा.भट्टराईको सत्तोसराप ! - Everest Dainik - News from Nepal
सामाजिक सञ्जालमा डा.भट्टराईको सत्तोसराप !
काठमाडौं, जेठ २८ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सत्तोसराप गरेका छन् ।
उनले नेपालको धार्मिक संस्कृति विकास र समृद्धिको बाधक रहेको र नेपालको धार्मिक संस्कृति हिन्दू परम्परालाई परिवर्तन नगर्दासम्म समृद्धि हासिल नहुने बताएसँगै उनको अहिलेको अहिले सत्तोसराप भएको हो ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘समृद्धिका आधार र प्रतिवद्धता नयाँ नेपालका लागि संकल्प’ विषयक कार्यक्रममा उनले ‘विकास र समृद्धि भनेको संस्कृति पनि हो। विचार र आचरणलाई संस्कृतिमा विकास गर्न सकिएन भने आर्थिक विकास गर्न सक्दैनौं हाम्रो धर्म र संस्कृतिले विकास गर्न सक्दैन।
यो जन्ममा दुःख गर अर्को जन्ममा सुख पाउँछौँ भन्ने हाम्रो संस्कृति छ। यो संस्कृतिले हामीलाई यही जन्ममा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने शिक्षा दिन्छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ’, भनेका थिए ।